July Dream: Dear Yesterday - 5
မနေ့က စကာင်္ပူက မြန်မာသံရုံးမှာ အခွန်သွားဆောင်ဖြစ်တယ်။ ပတ်စ်ပို့စာအုပ် သက်တမ်းက စက်တင်ဘာမှာ ကုန်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် အက်စ်ပတ်စ် သက်တမ်းတိုးဖို့ကျတော့ ကိုးလို့ကန့်လန့် ဖြစ်နေရောလေ။ ဒါနဲ့ ကျန်သေးတဲ့ ၆ လ သက်တမ်းကို အဆုံးခံလိုက်တယ်။ ရှေ့အပတ်တုန်းက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ရှိနေလို့ တစ်နေ့မှာ အယောက် ၃၀ ပဲ လုပ်ပေးတော့ သံရုံးမှာ ကျိတ်ကျိတ်တိုး တန်းစီခဲ့ရကြတယ်။ အခု ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ပြီးသွားလို့ အရင်လို တန်းမစီလောက်ရဘူး ထင်ထားတာ အထင်တွေ လုံးလုံးကို လွဲတော့တာပါပဲဗျာ။
မနက် ၆ နာရီခွဲလောက် အိပ်ရာထပြီး ၇ နာရီလောက် ရထားဘူတာ ဆင်းခဲ့တယ်။ ရှေ့အပတ် ပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ သောကြာနေ့မှာ မြန်မာသံရုံး ဘယ်နားမှာ ရှိသလဲကို သွားကြည့်ထားလိုက်တော့ အခုတစ်ခေါက်မှာ သံရုံးကို ရှာစရာမလိုဘူးလေ။ ဒါနဲ့ သံရုံးဝင်းအ၀ကို မနက် ၈ နာရီ မထိုးခင်လောက် ရောက်တယ်။ သံရုံး တံခါးဝမှာ လူ ၃ ယောက်လောက်ပဲ ထိုင်နေတော့ အတော်လေးကို ပျော်သွားတယ်။ လူနည်းတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ စပြီး လွဲတော့တာပဲ။
သံရုံးအ၀မှာထိုင်နေတဲ့ ရွှေတစ်ယောက်ကို မေးလိုက်တယ်။ အခွန်ဆောင်ချင်လို့ပါ ဆိုတော့ သူက အထဲကို ၀င်သွားလိုက်ပါတဲ့။ ဒါနဲ့ သံရုံးဝင်းထဲကို ၀င်လိုက်တော့ အားပါးပါး လူတွေ လူတွေ... အများကြီးပဲ။ ခြံထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့သူတွေ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့သူတွေ... သံရုံးအဆောက်အအုံထဲမှာလည်း ခုံနဲ့ ထိုင်နေတဲ့သူက ထိုင်... မိုးတိုးမတ်တပ် ရပ်နေတဲ့သူက ရပ်နဲ့ တကယ့်ကို ဖွေးဖွေးလှုပ်ပဲ။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် ဖြည့်ရတဲ့စာရွက်တွေက စားပွဲတစ်ခုမှာ အခန့်သားလေး။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ စာရွက်ကို လိုက်ရှာလိုက်တယ်။ အခွန်ဆောင်နဲ့ သက်တမ်းတိုး ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားလွှာလေးပေါ့။
ဒါနဲ့ ဖောင်ကို အရင် အားကြိုးမာန်တက် ဖြည့်လိုက်တယ်။ ပတ်စပို့ အမှတ်၊ ထုတ်ပေးတဲ့ နေ့စွဲ့၊ သက်တမ်းကုန်မယ့် နေ့စွဲတွေ ဖြည့်ရတာပေါ့။ ပြီးတော့ ၁ လကို လခ ဘယ်လောက်ရလို့ အခွန်ငွေကို ဘယ်လောက်ဆောင်ချင်ကြောင်း သံအမတ်ကြီးကို ဦးတိုက် လျှောက်ထားရတာပေါ့ကွယ်။ ဖောင်ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ ဖောင်ကို ဘယ်နား တင်ရမှန်း မသိသေးပါဘူး။ ကောင်တာတွေကို လိုက်ကြည့်တော့ ကြားဖူးနားဝ ရှိတဲ့အတိုင်း မြန်မာရိုးရာ တန်းစီစာရင်းစာအုပ်ကြီးကို ထည်ဝါစွာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သြော်... ငါလည်း စာရင်းဖြည့် တန်းစီရမှာအုံးကို ဆိုပြီး အမည်၊ ပတ်စ်ပို့အမှတ်၊ မိဘအမည်တွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ရေးပြီး အမှတ်စဉ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ၈၆ တဲ့။ အဟင့်...
နောက်မှ သိလိုက်ရတာက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ပြီးသွားတာတောင် ကိုရွှေမြန်မာများက အစဉ်အလာမပြတ် မနက် ၂ နာရီကတည်းက သံရုံးရှေ့မှာ အခွန်ဆောင်ဖို့ တန်းစီနေကြတုန်းပဲလေ။ သံရုံးကလည်း အဲဒီလို တန်းစီဖို့လည်း မပြောထားပါဘူး။ မနက် ၅ နာရီလောက်မှ စ တန်းစီလည်း ရရဲ့သားနဲ့ ဘာကြောင့်များ ၂ နာရီကတည်းက လာတန်းစီနေကြတာလဲ။ တစ်ယောက်က ၂ နာရီ လာတန်းစီရင် ကျန်တဲ့လူတွေလည်း လိုက်ပြီး တန်းစီကုန်ကြပြီပေါ့။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် အခွန်လာဆောင်တာတောင် ဘာကြောင့်များ ကိုယ့်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲ အပင်ပန်းခံနေကြလဲနော်။ ဘာလို့များ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညှင်းဆဲနေကြလဲနော်။
မနက် ၉ နာရီခွဲမှာ သံရုံးက အလုပ် စ လုပ်ပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်တိုင်းမှာ ငါးယောက် တစ်ခါလောက် ခေါ်နေတော့ မဆိုးလှပါဘူး။ ၁ နာရီဆို အယောက် ၂၀ လောက် ဖောင် တင်ဖြစ်သွားကြတယ်။ ကောင်တာက အန်တီဆီမှာ ဖောင်တင်ပြီးရင် အန်တီက စစ်ဆေးပါတယ်။ ဖောင်မှာ ဖြည့်ထားတာတွေ မှန်ရဲ့လားပေါ့။ အခွန် ဘယ်လောက် ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို တွက်ပြပါတယ်။ အဲဒီ ပမာဏကို ဆောင်နိုင်မလား ပေါ့။ ငွေအလုံအလောက် ပါလာလို့ ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီဖောင်ကို လက်ခံလိုက်ပြီး ငွေသွင်းဖို့ တိုကင်ပြားလေး ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ ငါးယောက်တစ်ခါ ငါးယောက်တစ်ခါ ခေါ်နေလိုက်တာ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲမှာ အယောက် ၇၀ လောက် ပြီးသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့် အမှတ်က ၈၆ ဆိုတော့ မနက်ပိုင်းမှာ ခေါ်တဲ့အထဲ မပါနိုင်ဘူးဆိုတာကို သိပေမယ့် အပြင်လျှောက်သွားရမှာ ပျင်းတာနဲ့ပဲ သံရုံးထဲမှာပဲ ထိုင်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို ကြည်ညိုဖူးမျှော်နေခဲ့ပါတယ်။ နေ့လည် ထမင်းစားချိန် နားတော့ အပြင်ထွက်ပြီး အနီးအနားက ရှော့ပင်းမောလ်ထဲမှာ ထမင်းသွားစား လိုက်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့ ဟိုနားဒီနား သဝေထိုးနေပြီး အချိန်ဖြုန်းလိုက်တယ်။ နေ့လည် ၂ နာရီထိုးခါနီးကျတော့ သံရုံးဘက်ကို လမ်းလျှောက် ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။
သံရုံး ထမင်းစားချိန်က ၁၂ နာရီခွဲကနေ ၂ နာရီအထိ ဖြစ်ပေမယ့် ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်ကျမှ အလုပ် ပြန်စ လုပ်ပါတယ်။ အလုပ် စ လုပ်ပေမယ့် ဖောင်တွေကို တင်ဖို့ မခေါ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရွှေတွေ ၀င်းနေအောင် ၀တ်ထားတဲ့ အသက်ကြီးကြီး ရွှေမမ က မာနကြီးတခွဲသားနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမေးမမြန်းပဲ ကောင်တာက အန်တီ လာမှပဲ ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ ဘာတွေ ဖြည့်ရမလဲဆိုတာကို မပြီးနိုင် မဆီးနိုင် အင်တာဗျူးနေတယ်ဗျာ။ ထမင်းစားချိန်ကမှ သံရုံးကိုရောက်လာပြီး အဲဒီအချိန်ကတည်းက အခန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ရွှေတွေကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ မေးပါလားဗျာ။ မျက်နှာထား တင်းတင်းနဲ့ သူ့လုပ်စာပဲ တစ်လောကလုံး ထိုင်စားနေတယ်များ မှတ်နေလား မသိဘူး။ ဘာမှ မမေးမမြန်း ခပ်တည်တည် ထိုင်နေပြီးတော့ အခုမှ သူများ အလုပ်ချိန်ကျမှ ထမေးတော့ အဆူအဟောက် ခံလိုက်ရတာ မသနားတဲ့အပြင် ဖနောင့်နဲ့ပါ ထပ်ပေါက်ချင်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ သူလုပ်လိုက်လေ ၁၀ ယောက်စာ အချိန် နာရီဝက် ကုန်သွားတယ်။ ကြာတော့ ဟိုအန်တီလည်း စိတ်မရှည်ပဲ ဆူတော့ ဟောက်တော့ တာပေါ့ဗျာ။
အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်အလှည့်ကို နောက်ထပ် နာရီဝက်အတွင်းမှာ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အမည်ခေါ်ခံလိုက်ရတော့ ပျော်လိုက်တာနော်... ပြောမပြတတ်အောင်ပဲလေ။ အဲဒါနဲ့ ကောင်တာနားကို သွားလိုက်ပါတယ်။ ရှေ့က လူတွေကလည်း လူတွေပဲ။ အားနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဖောင်လေးကို ဖြည့်ထားပါလား။ ဟိုက ခေါ်မှာ ဖောင်မှာက မဖြည့်ရသေးတဲ့ အပေါက်တွေနဲ့။ အခွန်ဆောင်မယ်ဆို လခ ဘယ်လောက် ရလဲဆိုတာကို ဖြည့်ရမှာကို မဖြည့်ထားဘူး။ ဘယ်နှလစာ အခွန်ဆောင်မှာလဲ ကို မဖြည့်ထားဘူး။ ဟိုက မေးမှ ဖြည့်တော့ သူတို့အတွက် အချိန်တွေ ထပ်ကုန်တာပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော့်အလှည့်ကျတော့ ရှင်းပါတယ်။ နဂိုကတည်းက သေချာ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသားလေ။ ကော်ပီ ကူးစရာတွေကိုလည်း အဆင့်သင့် ကူးထားပြီးသား။ ပတ်စ်ပို့ ဓါတ်ပုံပါတဲ့ စာမျက်နှာ၊ ပတ်စ်ပို့ သက်တမ်းပါတဲ့ စာမျက်နှာ၊ အက်စ်ပတ်စ်ကဒ် ကော်ပီ၊ အခွန်တစ်ခါမှ မဆောင်ထားရသေးတဲ့အတွက် အလုပ်က လစာနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ထောက်ခံစာ (မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်) တွေကို အတွဲလိုက် တင်ပေးလိုက်တော့ အေးဆေးပဲလေ။ တစ်လကို ၈၀ ဒေါ်လာနဲ့ အခွန် ၁ နှစ်စာအတွက် ၉၆၀ ဒေါ်လာ၊ စာအုပ် သက်တမ်းတိုးတာက ၃၀၀ ၊ စုစုပေါင်း ၁၂၆၀ ဒေါ်လာ ဆောင်ရမယ်။ ဆောင်နိုင်လား ဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ ဆောင်နိုင်ပါတယ်ပေါ့။ ၂ မိနစ်တောင် မကြာဘူး။ အဲဒီလို မြန်တာ။ အဲဒါနဲ့ တိုကင်အမှတ် ၇၃ နဲ့ တိုကင်ပြားလေး ထွက်လာပါတယ်။
တိုကင်ပြားလေး ကိုင်ပြီး ကိုယ့်နေရာကို ပြန်ထိုင်ပေါ့။ အဲဒီ ခုံဘေးမှာ အလယ်တန်းကျောင်းမှာ သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာမနဲ့ ပြန်တွေ့သေးတယ်။ အစက ဆရာမက ရှေ့တန်းမှာ ထိုင်နေတော့ မတွေ့မိလိုက်ဘူး။ နောက်မှ ကျွန်တော့် ခုံဘေးမှာ လာထိုင်နေတော့ တွေ့မိတာလေ။ ဆရာမနဲ့ ပြန်တွေ့ရတာ ကလေးဘ၀ကို ပြန်ရောက်သလိုပါပဲ။ တကယ်ပါ ကျောင်းတုန်းက ဆရာတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရင် ကျွန်တော် ပြန်ငယ်သွားသလို ခံစားရပါတယ်။ ဆရာမနဲ့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောကြတာပေါ့။ ဆရာမက ၂၀၀၄ လောက်ကတည်းက သူ့ကလေးတွေကို ဒီမှာ ကျောင်းလာထားဖို့ ရောက်နေတာလေ။
ဆရာမနဲ့ စကားပြောရင်း အချိန်တွေ ကုန်မှန်း မသိ ကုန်သွားတယ်။ ညနေ ၃ နာရီခွဲလောက် ရောက်တော့ ကျွန်တော့် တိုကင်အမှတ်ကို ငွေသွင်းကောင်တာက လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀ တန် အထပ်ထပ်နဲ့ ဆယ်တန်တစ်ရွက်ကို လက်မှာကိုင်လို့ ... စိတ်ထဲမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို ရည်စူးလို့ ... အနားတ၀ိုက်က ခုံတွေမှာ ထိုင်နေတဲ့သူတွေကို ကျွန်တော့်အလှူအတွက် သာဓုခေါ်ဖို့ တီးတိုးမှာကြားရင်း နိုင်ငံတာဝန် ကျေပွန်ဖို့အတွက် အခွန်ငွေ ၁၂၆၀ ဒေါ်လာ ဆောင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ကောင်တာက အခွန် ၁ နှစ်စာ ဆောင်ထားကြောင်း ထောက်ခံစာ ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။ သြော်... စာရွက် ၁ ရွက်အတွက် ပေးဆပ်ရတဲ့ အရင်းအနှီးက အတော်ကြီးတာပဲနော်။
အခွန်ပြေစာ ရပြီးတော့ ဆရာမနဲ့ ခဏတဖြုတ် စကားပြောနေပါသေးတယ်။ ဆရာမရဲ့ တန်းစီအမှတ်က ၁၃၀၀ ကျော်ဆိုတော့ အတော်ကြာအုံးမှာဆိုတော့ ဆရာမက ကျွန်တော်ကို ပြန်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သံရုံးကနေ ညနေ၄ နာရီကျော်မှာ ရင်ကိုကော့ ခေါင်းကိုမော့ပြီး အောင်ပွဲရ ခြေလှမ်းကြဲများနဲ့ တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းပြီး ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။
သံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အနှစ်ချုပ် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ပတ်စ်ပို့၊ အိုင်ဒီကဒ် စာရွက်စာတမ်းတွေကို ကော်ပီကူးလာခဲ့ပါ။ မြန်မာသံရုံးက ကော်ပီကူးစက်က တခါတလေ သုံးရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ရေဘူး၊ သကြားလုံး၊ အစားအစာ ယူလာခဲ့ကြပါ။ လိုအပ်တဲ့ဖောင်ကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပါ။ လခကိုလည်း ဖြည့်ထားပါ။ အက်စ်ပတ်စ်ဆို ၈၀ ဖြည့်ရင် ရပါတယ်။ သူတို့ အမေးအမြန်း မထူပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လိမ်နေတာကို သူတို့လည်း သိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ဘက်က မှားနေတာရှိရင် ကြည့်လုပ်ပေးပါလို့ လုံးဝ မပြောပါနဲ့။ အတော်ကို စိတ်ဆိုးပါတယ်။ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေက တရားဝင် ဥပဒေဘောင်အတွင်းက မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ပေးနေတာပါ။ အကြံအဖန် မပါတဲ့အတွက် ကြည့်လုပ်ပေးပါလို့ မပြောပါနဲ့။ သူတို့ ပြောသမျှကိုပဲ နားထောင်ပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါ။ တတ်နိုင်သမျှ စကားကို ချိုချိုသာသာနဲ့ အတိုချုံး ပြောပါ။ အရစ် မရှည်ကြပါနဲ့။ နောက်မှာ စောင့်နေရတဲ့သူတွေကို အားနာကြပါ။ မသိတာရှိရင် မြန်မာပီပီ အနားတ၀ှိုက်က ဘ၀တူ ရွှေတွေကို မေးကြပါ မြန်းကြပါ။ အဝေးမြေကို ရောက်နေကြပေမယ့် ကူညီရိုင်းပင်းတတ်ပါတယ်။
ကဲ... အဲဒါတွေက မနေ့ကပေါ့။
Posted by JulyDream at 11:20 AM
ဒီနေ့ အကြောင်း ထပ်ရေး ဗျာ :P
သာဓု သာဓု ..
၂ ခါပဲ ခေါ်မယ်.. သူတို့က အဲဒီပိုက်ဆံကို ဘယ်နေရာ သုံးမယ် မသိသေးလို့...
ဒီနေ့အကြောင်းကို မနက်ဖြန်မှာ မနေ့က ဆိုပြီး ပြန်ရေးရင် ကောင်းမလား လို့... ကိုစိုးထက်ရေ...
ဘယ်နေရာမှာ သုံး သုံးလေ... ကျွန်တော် လှူကတည်းက ယတိပြတ် လှူထားတာပဲ။ သာဓု အပြည့်ခေါ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်လေ။ တော်ကြာ ကုသိုလ်အပြည့် မရလိုက်ပဲ ကျန်ခဲ့အုံးမယ်နော်။
မနေ့တုန်းကလား ဒါမနက်ဖြန်လား .. နောက်တစ်ခါထပ်သွားရအုံးမှာတော့ သေချာတယ်လေ .. ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
So u can go and vote at embassy coz you have paid the taxes during 2007. Our embassy service is only to take money and no other than that Just like robbery. I have never hold so much money in my hand in any other places but just only in myanmar embassy. My greatest wish is to change the goverment as soon as possible.